ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:00 PM
ကျေးဇူးပါ အစ်ကို ။ အားလပ်တဲ့ တစ်ရက် သွေးလှူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမည်။ အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ အစ်ကို။
ဟိုနေ့က ဒုတိယအကြိမ် သွေးလှူဖို့ မက်ဆေ့ဝင်လာတယ်
သွားဖြစ်ဦးမှာပါ ..း))
မေသူ ၂ကြိမ်တိတိ ကြိုးစားဖူးပါတယ်..... ရန်ကုန်မှာ တခါ၊ ဒီမှာတခါ... ၂ခါလုံးမအောင်မြင်ပါ.း( သွေးအားမပြည့်လို့ ..... ဒီမှာတခေါက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ သွေးအားထက် 0.02 လျော့နေလို့ .... ဝမ်းနဲစွာနဲ့ လက်လျော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်.....
သာဓုပါဗျာ. ။ ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်မှာတစ်ခါလှူဖူးတယ်..။ ဒီမှာ သွားလှူမယ်ဆိုပြီး မမိုးခါး တို့ ဂျပန်ကောင်လေး တို့ ဆောင်းနှင်းရွက်တို့ နဲ့ အတူတူသွားကြတယ်.။ ဟိုရောက်တော့ ဖေါင်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းဆေးတစ်ခုခု မှီဝဲထားပါသလားဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်က yes လုပ်လိုက်တယ်. တစ်ကယ်လည်း အစာကြေဆေး ထွက်မလာခင်သောက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ကို စစ်ပေးတာလဲ မြန်မာဆရာဝန်မမ တစ်ယောက်ပါ. သူက တော့နောက်တစ်ကြိမ်မှ လှူတာပိုကောင်းပါတယ် ဆိုတာနဲ့ ၀မ်းနည်းစွာ မလှူဖြစ်လိုက်ပါဘူး.။ ဂျပန်ကောင်လေး(ရန်ရန်) နဲ့ ဆောင်းနှင်းရွက်(သဲသဲ) တို့ကတော့ လှူပြီး ပါတ်တီးလေးကိုယ်စီနဲ့ အပြုံးကိုယ်စီ ဆောင်ပြီး ပြန်ထွက်လာကြတာမြင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တိုင်မလှူခွင့်မရလိုက်ပေမဲ့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်..။ ဟဲကိုယ့်အိမ်ကျနေတာပဲ အများကြီးလျှောက်ပြောနေတယ်ဗျ.။ အဓိက သတင်းပေးချင်တာပါ.. သွားလှူခါနီးမှာ တိုင်ရင်းဆေးဝါးများ. မှီဝဲမထားမိစေဘို့ပါ..။ဆရာဝန်မမ ပြောပြတာကတော့ ကိုယ့်သွေးထဲက တိုင်းရင်းဆေးရဲ့ ဓါတ်တွေမပျယ်ခင် ထုတ်လိုက်တဲ့သွေးကို ကလေးငယ်တွေနဲ့ နာမကျန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံစားနည်းနေသူတွေရဲ့ ကိုယ်ထဲကို သွင်းမိရင် အခန့်မသင့်တာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်..။။ ဆော်ရီး ကို ကောင်းကင်ရေ. ရေးတာများသွားပြီး.။ ကျွန်တော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်လှူဘို့ ကြိုးစားဦးမှာပါ.။
မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ် တစ်ခုပါ ..
နောင် ၄ လ တစ်ခါတိုင်း
ဆက်လက် လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ ..>>>
ကျနော်တော့ အဲဒီမှာ ၂ ခါလှူခဲ့ဖူးတယ်.. ဒီမှာလည်း လှူဖြစ်ဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...